Nyaahụ, anyị bipụtara otu isiokwu akpọrọ "GeoFS: Egwuregwu ikuku nke si na ihe nchọgharị site na iji Cesium", nke anyị kwuru banyere ya na nke mbụ ya Cesium, na ndị ọzọ kpọmkwem Chibuzor, mgbe ọ na-ekwu na ọ na-eji ya GeoFS, maka ịbụ teknụzụ mepere emepe nke na-enye ihe ngosi mbara igwe zuru ụwa ọnụ nke ndị egwuregwu na-ahụ.
Na-ekwu banyere Weebụsaịtị gọọmentị Cesium banyere Chibuzor, ọ bụ:
Cheta na: Okwesiri ighota ya, Cesium bụ onwe na azụmahịa nzukọ, mgbe Chibuzor ọ bụ teknụzụ mepere emepe mepụtara.
GeoFS: Egwuregwu ikuku nke ikuku site na ihe nchọgharị site na iji Cesium
1.1 Gịnị bụ CesiumJS?
Gịnị bụ CesiumJS?
Dị ka Ebe nrụọrụ weebụ CesiumJS na GitHub, Chibuzor es:
Na mgbakwunye, ịbụ onye ewuru n'okpuru emeghe ụkpụrụ, Chibuzor nwere ma na-enye a mmekọrịta siri ike, nke na-enye ya ohere irite ọtụtụ ngwa, nke n'aka ya baara ọtụtụ nde ndị ọrụ uru. Ọ dị mkpa iburu n'uche na, Chibuzor a tọhapụrụ n'okpuru Akwụkwọ ikike Apache 2.0, nke na-eme ka ọ bụrụ n'efu maka iji azụmaahịa na azụmaahịa.
Ndị mmepe ya kwuru na:
"Ejiri nlezianya rụọ CesiumJS; A na-enyocha koodu nke ọha na eze, a nwalere ya na ihe karịrị 90% mkpuchi koodu, ma nyochaa nke ọma, dekọọ ya ma mepụtara ya".
Kedu usoro bara uru nke mere ka ọ nweta, nke ahụ Chibuzor nwere ikike ịnye njirimara ma ọ bụ arụmọrụ dị mkpa ma baa uru, na ngwaahịa eji ya, dị ka:
Nhazi nke 3D Panels iji zipu, hazie ma soro 3D data dị iche iche na-emekọ ihe, gụnyere ụdị foto foto, ụlọ 3D, mpụga na ime CAD na BIM, na igwe ojii na-ekwu okwu.
Ike imepụta ọtụtụ geometries, gụnyere polylines, polygons, billboards, labels, extrusions, and runners.
Ikike ịmepụta ọtụtụ ihe ngosi dị ka: Onyunyo, gụnyere onyinyo nke ya na onyinyo dị nro dabere na ọnọdụ anyanwụ; Ikuku, foogu, anwu, enwu site n’anyanwu, onwa, kpakpando na mmiri; na ihe ntanye ururu dika anwuru oku, oku na oku.
Ikike ịdọrọ ihe onyonyo n'iji WMS, TMS, OpenStreetMaps, Bing na Esri.
Mmekọrịta na ụdị vektọ, nke bụ ọkọlọtọ ụlọ ọrụ na mpaghara, dịka KML, GeoJSON na TopoJSON.
Dendrite, ihe nkesa nkwukọrịta na ntinye nke protocol Matrix
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Linux 5.9 na ndị a bụ akụkọ ya